5 min novakiana
Bangalore dia manan-karena amin'ny kolotsaina ara-pinoana sy an'izao tontolo izao, izay hita amin'ny toerana ara-pinoana isan-karazany, amin'ny toerana mamorona asa tanana Kannada, fiaraha-monina ary fomba amam-panao. Anisan'ny andriamanitra andriamanibavy be mpivavaka indrindra ao India koa i Bangalore. Tsy mahaliana ihany ny mahita ny fanoloran-tenan'ny olona avy amin'ny lafim-piainana rehetra, avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao hankasitraka ny hakanton'ny tempolin'i Bangalore, fa koa ny maritrano, voaravaka ireo pitsikitsika indianina atsimo mahavariana. Andao hanao fitsidihana.
Amin'ny ankapobeny, ny ankamaroan'ny Sidina Goa mankany Bangalore amidy amin'ireo tanora mankafy fety sy tia amoron-dranomasina izay manompo an'i Goa noho ny hadalana rehetra, nefa misy koa olona marobe izay be zotom-po ara-panahy ary tia mitsikilo ireo antsipirian'ny tranon'ny tempoly manerana an'i India. Ka raha Bangalore no fijanonanao dia alao antoka fa mitsidika ireto tempoly manaraka eto an-tanàna ireto ianao. Aza adino fotsiny ny iray amin'ireto!
Ny Tempolin'i Bull tamin'ny taonjato fahenina ambin'ny folo, natsangana tamin'ny fomba Dravidian mahazatra, ary any Basavanagudi no misy azy. Izy io dia manana metatra efatra metatra sy sasany, ary sampy omby enina metatra ny halavany, izay nesorina tamin'ny vatan-kazo granita mitokana. Kempe Gowda no nanangana azy. Fetibe malaza sy manan-danja ao Karnataka, antsoina hoe Kadalekai Parishe (Groundnut Fair), dia natao tao amin'ny Tempolin'i Bull nanomboka ny volana novambra ka hatramin'ny desambra, rehefa nanolotra ny voam-boalobon'izy ireo voalohany ho an'ny omby sakrancier ny mpiompy.
ISKCON Sri Radha Krishna-Chandra Mandir dia manintona ireo mpankafy sy mpanolo-tena avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao, indrindra ireo izay mitady fianarana ara-panahy lalina. Tsy tempoly fotsiny izy io satria manana fampirantiana, hetsika ara-panahy ary ara-kolontsaina vitsivitsy, amin'izay mifandray amin'ny kilasy sy sekta rehetra ao amin'ny fiarahamonina. Ny tempoly dia namboarina tamin'ny antony manosika hampiroborobo ny kolontsaina Veda sy ny fianarana ara-panahy, ary ny singa mahavariana indrindra amin'ny firafitry ny tempoly dia ny Dwajastambha nopetahany takela-by, tsato-kazo 17 metatra ary Kalach Shikara nopetahany volamena 8.5 metatra.
Miorina ao Ulsoor, ny Tempolin'i Someshwara dia iray amin'ny sangan'asa maritrano amin'ny tarana Chola, miaraka amin'i Rajagopuram (tilikambo) manaitra. Tsangambato marobe, fantatra amin'ny anarana hoe Dwajasthamba, koa mijoro eo alohan'ny fitoerana masina izay natokana ho an'i Lord Shiva tanteraka.
Natokana ho an'ny Masoandro Masoandro, ity tempoly ity dia miavaka amin'ny sehatra manerantany satria izy no tempoly malaza indrindra eto amin'ny planeta natokana ho an'i Lord Suryanarayana. Namboarina tamin'ny fomba maritrano Chola amin'ny granite miaraka amina tilikambo goavambe miaraka amin'ny tarehimarika mazava, ny Tempolin'i Suryanarayana dia manana ny sampy goavambe an'ny Suryanarayana izay 3.25 metatra ny halavany ary nentina teto amin'ny Tempolin'i Badrinath. Na eo aza ny fitsidihan'ny mpitsidika marobe ny Tempolin'i Suryanarayana isan'andro, ny fotoana mety hitsidihana azy dia mandritra ny foara Swady Suryanarayana isan-taona, natao tamin'ny andro Rathasaptami tamin'ny volana Janoary.
Ny singa miavaka amin'ny lazan'ny Tempolin'i Banashankari dia ny ivavahan'izy ireo mandritra ny Rahukala, izay matetika no heverin'ny Hindus ho fotoana tsy mahafinaritra indrindra. Ny tempoly dia miorina amin'ny làlan'i Kanakapura ary tototry ny mpivavaka amin'ny talata, zoma ary alahady. Raha ny marina dia iray amin'ny fivavahana ara-pivavahana tsara indrindra izy io toerana hitsidihana any Bangalore.
Iza no nilaza fa i Bangalore dia miresaka momba ny fametrahana IT izay mikotrokotroka, ary ny fisotroana sy ny fisotroana pub fotsiny? Vao hitanao izao fa manana fironana lehibe amin'ny fivavahana ny tanàna ary manintona fizahan-tany ara-pinoana koa aza. Raha fanahy ara-panahy iray koa ianao, inona no andrasanao?